Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Sandals Royal Curaçao waa war wanaagsan dalxiiska Curacao
Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Aroosyada Jaceylka Malabka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dos Awa, Sandals Resorts 'barkad kaliya oo aan dhammaad lahayn oo leh sagxadaha sare iyo hoose ee ballaadhan oo ku habboon inay la yaabaan aragtida cabsida leh.
Sandals Resorts International (SRI) waxay soo bandhigaysaa tafaasiil cusub oo ku saabsan astaanta calankeeda astaanta 16 -aad ee aadka loo sugayo iyo shirkaddu markii ugu horreysay oo ay gasho Curaçao, magaca cusub ee Sandals Royal Curaçao.
Ogeysiis weyn ayaa soo socda Arbacada, Ogosto oo u qalma qof kasta oo ku fikiraya inuu tago dhammaan fasaxyada Boqortooyada ee loo dhan yahay ee Curacao oo leh maroojin Jamaican ah.
Dhammaantood waxay bilaabeen Maalinta Kirismaska ​​sannadkii hore markii Sandals Resort waxay ku dhawaaqday ballaarinta Jasiiradda Kariibiyaanka ee Curacao - oo leh maroojin Jamaica ah.
Sandals Curaçao wuxuu u keeni doonaa jaangooyooyinka cusub ee dalxiis ee jasiiradda, kuwaas oo isku mid noqday sumcadda caanka ah ee Dalxiisyada Sandals ee adduunka oo dhan ka jira.
Sandals Royal Curaçao wuxuu ku fadhiyaa meel gaar ah oo ilaalinaysa 3,000-acre.
Curaçao, oo ah jasiirad Kariibiyaanka Dutch -ka ah, ayaa caan ku ah xeebaha xeebaha u galay godadka iyo baalasheeda balaadhan ee hodanka ah ee hodanka ku ah nolosha badda. Caasimadda, Willemstad, waxay leedahay dhisme gumeysi midabkiisu midabkiisu sarreeyo, oo dul sabaynaysa Boqoradda Emma Bridge, iyo ciid-boodhka, Mikvé Israel-Emanuel Synagogue qarnigii 17-aad. Sidoo kale waa albaab laga galo xeebaha galbeedka sida Blue Bay, oo ah goob quusitaan caan ah.
Aasaasaha iyo Guddoomiyaha Caalamiga ah ee Sandals Resorts Resorts International, Hon. Gordon “Butch” Stewart wuxuu lahaa aragti ah inuu beddelo Jasiiradda Curacao wuxuuna raacay wiilkiisa, Guddoomiye Ku -xigeenka Adam Stewart bishii Diseembar isagoo ogeysiiskan;
Gordon “Butch” Stewart ayaa yiri: “Waxay noo ahayd farxad gooni ah inaan ka wada shaqeyno dowladda Curaçao iyo qoyska Smeets dadaalkan cusub ee xiisaha leh ee sumadda Sandals -ka. “Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno Roald Smeets, oo gacan weyn ka geystay howshan aadna ugu faraxsan in lala shaqeeyo. Waxaan qorshaynaynaa inaan qabanno wax ka badan qaybtayada si aan kor ugu qaadno qaddiyadda adduunka ee dalkan quruxda badan. ”
Waxay ku yaalliin 44 hektar gudaha guryaha gaarka loo leeyahay ee Santa Barbara, oo ah 3,000-acre oo ilaalin ah oo gaar ah, Sandals Royal Curaçao waxay si dhab ah u dhex geli doontaa yaababka adduunka dabiiciga ah-lamadegaanka, badda, buuraha, iyo xeebta-oo leh khibrad dalxiis. Waxaa lagu dhawaaqay in Royal Resort ay albaabadeeda furi doonto Abriil 14, 2022
Arbacadii, Ogosto 4, 2021Sandals ayaa ku dhawaaqday in ballansashada hadda ay suurtogal tahay waxayna la timid dhiirrigelin qiimaheedu yahay $ 1000.
Guji halkan si aad u hesho ogeysiis buuxa